Mamadika antsika ho lasa psychopaths ve ny media sosialy? | Martech Zone
Mampiala antsika amin'ny psychopaths ve ny media sosialy?
Zoma, Jona 14, 2013 Zoma, Jona 14, 2013 Douglas Karr
Fotoana fialamboly zoma izao! Olona maro be esory aho ary aza mankasitraka ny paikadiko ara-tsosialy hery an-tserasera. Tsy azoko antoka fa nisy nanasokajy ahy ho psychopath ampahibemaso na tsia, fa angamba misy olon-droa manontany tena. Tsy mino aho fa izaho - saingy mafana fo amin'ny adihevitra ataoko amin'ny Internet. Izaho aza dia mafana mihintsy indraindray - fa mbola manandrana mampiseho fanajana ny hevitry ny hafa aho.
Ny fiantraikany maharitra amin'ny fandaniana ny ainy amin'ny tontolo tena izy nefa mifandray tsy tapaka amin'ny virtoaly dia mbola tsy takatra tanteraka. Na dia efa nisy aza ny fitsaboana amin'ny fiankinan-doha amin'ny Internet hatramin'ny tapaky ny taona 90, dia tsara ny manamarika fa olona maro noho ny taloha no mampiseho ny fihetsika manohitra ny fiaraha-monina ankehitriny mifandraika amin'ny fandaniana fotoana be loatra amin'ny Internet. Avy amin'i WhoIsHosting Mampiala antsika amin'ny psychopaths ve ny media sosialy?
Ny fototry ny asako manokana an-tserasera dia ny fahitako ny besinimaro sy mangarahara momba ahy. Tompon'andraikitra amin'ireo zavatra lazaiko amin'ny Internet aho satria apetrako eo ny anarako sy ny sariko. Tsy manao zavatra tsy fantatra anarana aho. Mino aho fa ny ankamaroan'ny fihetsika psychopathic hitantsika amin'ny Internet dia satria tsy misy akony ho an'ny olona mikasoka na manao ratsy amin'ny Internet rehefa miafina ao ambadiky ny akanjo tsy itonona anarana izy ireo. Tsy mino aho fa misy dikany kokoa amin'ny Internet ny olona noho ny teo amin'ny tena fiainana… fa mora kokoa ny manao psychopathic rehefa tsy tompon'andraikitra manokana ianao.
Tsy hiovaova ny atiny raha tsy misy ny fiantsoana-hanao-hetsika
Jun 19, 2013 ao amin'ny 5: 09 PM
Ity dia infographic tsara! Heveriko fa marina be io. Lohateny tsara koa.
3 Nov 2013 tamin'ny 4:03 PM
TSY misy ifandraisany amin'ny media sosialy izany. Eo no toerana hita maso kokoa ny olana ary aiza no iarahan'ny info ny fiaraha-mianatra. Izy io dia misy ifandraisany amin'ny zava-misy fa ny Amerikanina… ..MANAIKA amin'ny asa. Ny zava-drehetra amin'ny fiainany dia mihodina amin'ny lafin'ny asa sasany, ary vitsy ny mahazo vakansy. Rehefa tsy ampy ny fotoana lanin'ny olona amin'ny zanany (ireo mpitarika antsika FUTURE sns) dia tsy mianatra miresaka zavatra amin'ny ray aman-dreniny ny ankizy. Betsaka no tsy mianatra ny fihetsem-po manasaraka antsika amin'ny biby. Hitako tamin'ny ambaratonga fidiram-bola rehetra izany. Ireo be karama dia matetika any am-piasana na any lavitra ary mandany fotoana kely amin'ny fampiakarana ny trosan'ny hetra, ny tiako holazaina dia hoe zaza ***. Anontanio ny mpivady nanny na au au, mampalahelo izany, nefa tena maharikoriko miaraka. Raha ny amin'ireo karama ambany ...… maro no miasa asa roa sns hanomezana azy…… ny ankizy tsy notezaina tsara. Mampalahelo ny manodidina azy rehetra .. ..dia aza sahy milaza fa mitovy i Alemana sns, samy hafa be izy ireo raha ny fotoam-pialan-tsasatry ny mpianakavy (tsy ny reny foana), ny fotoam-pialan-tsasatra sns. Misy fomba tsara kokoa hanampiana ny fianakavianay. Mamaky lahatsoratra foana aho miresaka momba ny maha-mpiasa mahomby indrindra ny Amerikanina na aiza na aiza… .. Avy eo mandehana amin'ny 6 andro fiasana ary tezao ny zanakao *** !!!
3 Nov 2013 tamin'ny 7:20 PM
Mino aho fa iray amin'ireo Amerikanina nolazainao momba ny @driventowin: disqus! Na izany aza, tsy hanaiky aho fa nisafidy asa asa mihoatra ny fianakaviana. Nanao ny roa foana aho ary nanana fifandraisana mahatalanjona tamin'ny zanako (ray irery aho). Tsy mino aho fa mila mahafoy ny iray ho an'ny iray hafa ianao. Ary tsy hataoko farany ho faty ny fianakaviako.
3 Nov 2013 tamin'ny 10:58 PM
Tena mahafinaritra ny maheno olona, ​​tena izy. Mahita fianakaviana maro aho izay tsy fantatrao ihany fa fianakaviana b / c tonga izy ireo ary miara-miala. Ny sasany kosa tery tanteraka amin'ny olana ara-toekarena ka tsy afaka mankafy fiainana. Niorina ve ianao talohan'ny nanananao zanaka? Sa hanao ny zava-drehetra aorian'izany? Mora kokoa ny manao raha manana zanaka ianao aorian'izany, saingy azo atao izany.
4 Nov 2013 amin'ny 10:22 maraina
Raha tsy nanomboka ny orinasako manokana aho (miaraka amin'ny $ 0 sy ny zanako lahy manomboka amin'ny oniversite) vao nahazo fahalalahana nampifangaro azy roa aho! Mino aho fa miasa ora maro kokoa noho ny Amerikanina antonony - fa ny ankamaroany dia ivelan'ny fotoanan'ny fianakaviana manomboka amin'ny misasakalina ka hatramin'ny 4 maraina 🙂